Ukuphupha i-Makeup Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ubuso ngokubanzi buthetha uyilo lobuso kunye neenwele. I-Makeup, i-powders, i-mascara, i-eyeshadow, i-cheek blush, kunye ne-lipstick yongeza umbala kwi-accents kwaye ugxininise kwi-charisma. Ngoncedo lokufihla, ukuchukumisa indawo kunokwenziwa apho ukungafezeki okunjengeemithambo ezibomvu okanye luhlaza okwesibhakabhaka, amaqhakuva okanye iimowuli kunye neevalo ziphantse zanyamalala. Umqhaphu ukwadlala indima ebalulekileyo ekwenzeni izithambiso.
Kwifilimu nakwithiyetha, abadlali babhalwa ngendlela ekhethekileyo ukunika umlinganiswa abonise intetho yakhe ekhethekileyo. Cinga ngamaxesha amaninzi enzelwe abamnyama nabamhlophe. KwiCarnival, abantu abaninzi bahamba ezitratweni bebengezelisa amehlo. Kwaye ukwakheka kukwadlala indima ebalulekileyo kubantu bakudala, njengophawu lokuba bobabo kunye nepeyinti yomlo ekufuneka inike igorha ubukhalipha, ukomelela kunye nokungaphumeleli.
Ubuso bunokwenza iphupha liziveze njengobuntu ohluke ngokupheleleyo. Mhlawumbi ungumntu ophantsi ophantsi kubomi bokwenyani kwaye unxiba ukuzilungisa emaphupheni njenge vampire yokulukuhla. Ukutolikwa kwamaphupha, kunomdla ukufumanisa ukuba ingaba iphupha elo linguye okanye lelomnye umntu.
1 Uphawu lwephupha «ukwakheka» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukwenziwa» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukwenziwa» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukwakheka» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha «ukwakheka» kukuchazwa kwephupha uphawu lomthamo wephupha, ukubonakala kwangaphandle kwalo ubuntu ukuphembelela. Kuya kufuneka wenze umbono ocacileyo kwimeko yangoku, umzekelo kudliwanondlebe.
Ngokwakheka kwephupha, kunokuba yinto ekhethekileyo inkangeleko entle ukungenisa ngaphakathi. Isimboli yephupha ibonisa ukuba i-façade yokukhusela ngoku ithathwa njengeyimfuneko. Mhlawumbi ukuphupha kufuneka kuzikhusele ngongenelelo kubuntu bakho. Kwitoliki yamaphupha, nangona kunjalo, ukwenziwa kunokuqondwa njengesicelo sokungazikhohlisi okanye abanye.
I-Makeup inokuba sisilumkiso malunga neempazamo zomntu kunye nokutolika kwamaphupha. Makeln kuba. Isimboli yephupha "ukwakheka" itsalela ingqalelo yephupha kwinto yokuba kufuneka ujongane neziphene zakho kunokuba uzifihle. Kuya kufuneka, ngokwenyani yelizwi, ususe ukwenza kwakho ukuze ujongane nenyani. Ngokuchasene noko, ukuthambeka kubonisa ukuba omnye umntu uyamfamekisa umntu ophuphayo. Umntu akayo le nto athi uyiyo.
Ukusetyenziswa kokuthambisa emehlweni kunye ne-eyelashes ehlanjiweyo, umzekelo, kunokubonisa ephupheni ukuba awufuni ukubona into embi; Ukufaka imilebe ngamehlo ngokufanelekileyo kuthetha ukuba awufuni kuthetha into. Kutoliko oludumileyo lwamaphupha, ukwakheka kuhlala kusisikhumbuzo kwabanye ukuba bangasisebenzisi. inkangeleko entle khazimla.
Ukwenza umntu kuthetha ephupheni, ukunceda lo mntu ukuba abonakalise yena ngcono kunaye. Ukuthenga izithambiso kubonisa njengophawu lwephupha ukuba iphupha elo kufuneka lilindele ukugculelwa okanye ukukhutyekiswa. Ukuba i-makeup iyatsalwa, imaski iyatshatyalaliswa-kuyavela uqobo lwenene.
Ukuba izimonyo kubonisa uhlalutyo lwamaphupha ukuba okwam akunakufezekisa into ethile okanye injongo ekuvuseni ubomi, nokuba umntu uyafuna.
Uphawu lwephupha «ukwenziwa» - ukutolikwa kwengqondo
Nangona kwinkcubeko yethu yangoku amadoda nawo enxiba izithambiso, uphawu lokuphupha "ukwenza" kutoliko lwamaphupha kubhekisa kwicala lobufazi lokuphupha. Uyaqonda ngokungahambelaniyo nombuzo wokuba yeyiphi imiba yobuntu bakho ongathanda ukuyibonisa kwindalo esingqongileyo kwaye ngayiphi indlela.
Kwisimboli yamaphupha imfuno ibonakalisiwe, i-psyche ngokwayo kwi ukukhanya okungcono Ukuvela. Iimpazamo zomlinganiswa kufuneka zifihlwe kwaye zenziwe zingabonakali kwabanye. Ngokwenkcazo yamaphupha, umtsalane wobuso ulele kubanakho bokukhetha uhlobo umntu afuna ukumela lona.
Ukutolikwa kwengqondo yamaphupha, uphawu lwephupha "ukwakheka" luphawu lwefadade eyakhiwa ludonga njengodonga lokukhusela umphefumlo wakho. Ukuphupha kuqikelela ukuba ixabiso lokubonakala kwayo liphantsi kwaye lizama ukuyifihla ephupheni. Uphawu lwephupha lumele inzame yokungazi Ukuzikhohlisa Kwi-subconscious, iphupha linokufihla ingxaki yengqondo ongafuni kuyamkela.
Ukuba umntu uphupha ngokuqamba omnye umntu, oku kukuthi, ngokokuchazwa kwephupha, ukubonakalisa umnqweno wokubanika iminqweno yabo. mpe mbelelo. Ke ngoko, ukwakheka kubonisa nokuzama ukukhohlisa ephupheni.
Uphawu lwephupha «ukwenziwa» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "ukwakheka" kudala ulwazi malunga ne ukuguquguquka amanani apho umntu ophuphayo angazibonakalisa khona. Imbonakalo eyahlukileyo ichaza iinkalo zobuntu obufanayo.